သူ့ကို စိတ်ပျက်နေပြီလား - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 22/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ချစ်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်အပေါ် စိတ်ပျက်နေမိပြီလား? သူ ဘေးနားမှာရှိနေတာဟာ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ပင်ပန်းမှုတစ်ခု၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်တော့တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေလို့ ခံစားနေရပြီလား? တချိန်က အရမ်းချစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သူက ခုချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီလား?
တစ်ချိန်က သူ့အသံချိုချိုလေးတွေဟာ ခုချိန်မှာ စိတ်ပင်ပန်းစရာ အသံတွေဖြစ်လာမယ်၊ တစ်ချိန်က ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် သူနဲ့မှ အတူတူလုပ်ချင်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ သူအနားရှိနေတာဟာ စိတ်ညစ်စရာဖြစ်လာနေမယ်၊ သူ မရှိရင် မဖြစ်ဘူးထင်ခဲ့ဘူးပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ သူမရှိမှ ကိုယ်ပျော်နေပြီဆိုတာမျိုး စိတ်ခံစားလာနေရပြီဆိုရင် လက်ရှိ အချစ်ရေးအပေါ် သေသေချာချာ မေးခွန်းထုတ်ဖို့ လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
စချစ်ကြစဉ်တုန်းကတော့ အရမ်းချစ်နေခဲ့ကြလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြစ်မမြင်ရက်ကြပါဘူး။ အပြစ်တွေ၊ အဆင်မပြေတာတွေရှိနေရင်တောင်မှ သည်းခံဖြတ်ကျော်ကြတယ်။ ချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့။ ကြာလာလေလေ သည်းခံနိုင်စွမ်းနည်းပါးလာလေလေပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးရောက်လာခဲ့ရင်တော့ ပြဿနာတွေ စတော့တာပါပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလို့ မြင်လာစေတဲ့ ယျေဘုယျအချက် ၄ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁။ အစောတလျင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် – များသောအားဖြင့် ခုလို ပြဿနာမျိုးတွေဟာ အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့ အချစ်ရေးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ခုမြင်ခုကြိုက်၊ ခုတွေ့ခုယူ အတွဲတွေမှာပေါ့။ ဒီလိုပြောလို့ အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိအောင် တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ ချစ်သူစွဲတွဲတွေမှာတော့ ဒီပြဿနာမျိုးဖြစ်နိုင်ချေပိုနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Relationship တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုရင် သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှန် (Right Person) ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကို အရင်ဆုံး အချိန်ယူဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
၂။ ကလေးဘဝ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့် – တချို့တွေအတွက်တော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက Relationship တစ်ခုကို အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာတည်ဆောက်ဖို့အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုပြဿနာတွေ၊ မိဘတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကို တွေ့မြင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ အရွယ်ရောက်လာချိန်တွေမှာ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားကို အလွန်အမင်း တောင့်တလေ့ရှိပေမယ့် နားလည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပြီး ကာလကြာရှည်ဆုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူး။ တခါတလေမှာ ဒီအချက်ကြောင့် ကိုယ့်အပေါ် စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားသူတွေကိုတောင် အဝေးဆီရောက်သွားစေတတ်ပါတယ်။
၃။ ပါဝါအားပြိုင်မှု – တချို့သော အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းမပါပဲ ဇာတ်သိမ်းသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြန်အလှန် လေးစားမှုမရှိတာမျိုး၊ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်မုဒိတာမပွားနိုင်တာမျိုးတွေကြောင့် အချင်းချင်းပြိုင်ဘက်အသွင်ဆောင်လာပြီး နိတ္တိတံသွားတာမျိုးပါ။ ကိုယ့်အတ္တကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်လေ့ရှိသူတွေအများဆုံး ကြုံရတတ်ပါတယ်။
၄။ စိတ်ဖိစီးမှု – စိတ်ခံစားမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာအားလုံးနီးပါးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဒီပရက်ရှင် (Depression) ကောင်ဇိုးကြီးက ရှိနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာတွေကိုသာ ဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပျက်ယွင်းစေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် recurrent depression ၊ postpartum depression ဒါမှမဟုတ် mid-life depression တွေဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို တွန်းအားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မတူခြားနားတာတစ်ခုကတော့ ဒီပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်နေရရင် လမ်းခွဲဖို့ လက်ခံလိုက်တာမျိုးထက် အကူအညီပေးအပ်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်လာအောင် ကူညီပေးဖို့ ပိုသင့်ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီပြဿနာအတွက် အကြံပေးချက်ပဲရှိပါတယ်။ အဖြေမရှိတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကြံပြုပေးနိုင်တာတစ်ချို့တော့ရှိပါတယ်။
၁။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နေထိုင်မှုပုံစံကို လုံးဝခြားနားသွားတဲ့အထိ ပြောင်းလဲပစ်ပါ
၂။ ခံစားချက်အသစ်တွေ ဖြစ်စေမယ့် ခရီးမျိုးထွက်ပါ
၃။ ကိုယ်ဘယ်လို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို လက်တွဲဖော်ထံ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို ဆွေးနွေးပါ
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကိုယ်ဘာမှားနေလဲ ရှာဖွေပါ
၅။ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိတဲ့အထိ လိင်ဆက်ဆံပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အပြန်အလှန် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကုန်ခမ်းလာတာဟာ လိင်မှုကိစ္စမှာ ကျေနပ်ဖွယ်ရလဒ်တွေ မရတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၆။ နှစ်ဦးလုံးအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်ကြီးကြီး တစ်ခုလောက် ထားကြည့်ပါ။
ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပြီး ပြန်လည်ကြိုးပမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ကောင်းပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ပျက်စိတ်ကုန်သွားပြီဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ဖြေရှင်းရခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာပါပဲ။
စိတ်ပညာရှင်ကြီး ဆစ်ဂမန် ဖရွိုက်က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ‘တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆေးပြင်းလိပ်ဟာ ဆေးပြင်းလိပ်ပါပဲ၊ ဒီထက်မပိုပါဘူး’ တဲ့။ ဆိုလိုရင်းကတော့ ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်တွေ ပေးပြီး ပြောနေပါစေ။ ကိုယ်က သူ့အပေါ် စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ကျန်တာတွေအားလုံးက အပိုသက်သက်တွေပါပဲ။ သူ့အပေါ် အမှန်တကယ်စိတ်ပျက်နေပြီဆိုရင် ဒီထက်ပိုဆိုးလာဖို့က ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်က ဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာ သေချာနေတာကြောင့်ပါပဲ။
အငြင်းပွားမှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေဟာ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေပြီး အဖြေရှာလို့ရပေမယ့် စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့သွားတာကတော့ အဖြေရှာရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဝေးကွာသွားတာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်ဖက်က ဝေးကွာသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာလရှည်လက်တွဲလာပြီးတဲ့လူတွေဆိုရင် ပိုနားလည်သင့်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခု လက်တွဲလာပြီးချိန်ရောက်နေရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုနားလည်ရမှာမဟုတ်လား? ဒီအချိန်မှာ စိတ်ပျက်နေပြီဆိုရင် ဒါက အဆုံးအစွန် စိတ်ကုန်သွားတာဖြစ်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ချုပ်နှောင်ပြီး စိတ်ပင်ပန်းမနေပါစေနဲ့တော့။
တကယ်လို့ သူ့ကို ဆက်ဆွဲထားဖို့ ကြိုးစားဦးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ဒီစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ကိုယ့်မှာ သည်းခံနိုင်စွမ်း တကယ်ရှိရဲ့လားဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကိုပဲ ယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ လူနှစ်ဦးအကြားမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြားနားချက်ရှိသွားပြီမို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်တာက သူက ကိုယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးစွမ်းနိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိတဲ့ အချစ်ရေးကြောင့် လူနှစ်ဦးလုံး ပျော်ရွှင်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘဝနဲ့ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ဖြတ်သန်းကြမလဲ။ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှာဖွေပြီး ရှေ့ဆက်မှာလား? ဒီအမှောင်ထုထဲမှ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ မျက်ကန်းတွေလို လှမ်းလျှောက်နေကြဦးမှာလား?
လိင်အကြမ်းဖက်ခံ ရရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။